Umhla My Pet » 5 Izinto Amantombazana Yenza emva kokuba bohlukene
Nantsi eyona nyaniso, kuyaphula-ups kunzima. Kungakhathaliseki owavula oko, kwiiveki zokuqala ezimbalwa kubonakala ukuba ngonzima. lo gama, ekugqibeleni, sonke sisiya ukuze ufumane ezinye uyakuthanda, kukho izinto ezimbalwa onke amantombazana ntoni emva ligqobha. Abambalwa lubonisiwe ngezantsi:
1. benkqangaza – Okuninzi
Nokuba nto reminiscing ngaphezu memory, isipho, ingoma, okanye ukudubuleka random neemvakalelo, bedanduluka kuya kwenzeka ngokungenakunqandwa. Nza kwaye ebonisa iimvakalelo linyathelo lokuqala ngeposi ukuchacha yoqhawulo-up.
2. Facebook yakufa ex yakhe
Kukwesamela eendaba zentlalo, mhlawumbi le nto ocacileyo etshabalalisayo amantombazana ntoni emva kokuqhawula-up. Nasemva un-ngabahlobo, amantombazana na kunceda kodwa uchwetheze igama ex yakhe kwi bar yokukhangela kwaye rhoqo ekhondweni yena yonke photo, iphepha, kunye nobume uye uwuthandile okanye izimvo.
3. Misa icocwe
Nangona oku kusenzeka ukuxhasa ufikelelo kwi angst yokuba ngumsindo amadoda. Oku kungenxa yokuba nokuba sonke intliziyo ikhefu amantombazana ubuso amagqabi kancinane ukuba akukho amandla. kunye, ukuba entsha enye akukho bani ukuze ndiwakhumbule namantombazana usikhathalele ngaphantsi ukuba imilenze zakhe uchetyiwe okanye.
4. Phumela “floozy” iqonga
Eli nqanaba ixhomekeke intombazana intombazana kwaye kuxhomekeke lwenu beluludala kangakanani. Kodwa kukhuselekile ukuthi ukuba kungakhathaliseki ukuba bubuphi, yonke intombazana ogqitha kweli nqanaba ngandlela ithile okanye enye. Nokuba oko kudal iziselo ezininzi kakhulu, iifoto, okanye ukufumana wahlobana guys ezininzi.
5. Reinvents ngokwalo ngokuthi self-ukufunyanwa nokuzama izinto ezintsha
Ukususela iincwadi self-uncedo iimovie neencwadi ikhuthaze yoga, yonke intombazana uzama Ukuyila yena. Le Nokukhuza kubaluleke kakhulu kumjikelo yoqhawulo-up kuba kunceda kuphela ukuba balunqhele intlungu kodwa ngephanyazo ngokucacisa apho amantombazana “fumana” yena.
Nangona uthando kubuhlungu, kubalulekile ukukhumbula ukuba uthando kwenza ukuba womelele.